Qasaaraha ka dhashay qaraxii galabta Muqdisho ka dhacay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qasaaraha ka dhashay qaraxii galabta Muqdisho ka dhacay
Qasaaraha ka dhashay qaraxii galabta Muqdisho ka dhacay
Qarax xooggan ayaa galabta ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, dhinaca xiga Baar Bulsho.
Illaa iyo hadda lama yaqaan waxa qaraxa sababay, balse warar horudhac ah ayaa sheegaya in loo maleynayo inuu fuliyey qof is-miidaamiyey.
Waxaa lagu warramayaa in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof, halka tiro kale ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goobjoogayaal la hadlay Muqdisho Online. Dadka waxyeelada ay gaartay ayaa lagu warramayaa in badankood ay yihiin shacab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meesha uu qaraxu ka dhacay mararka qaar ay fariinsan jireen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Previous article(Faah Faahin) Qarax ka dhacay isgoyska Sayidka iyo faahfaahin laga helay
Next articleDowlada Somaliland ayaa karantiishay dhamaan Rakaabkii Saarna Ethiopia Airline